Nahoana i Thomas Emlyn no Tsy Nino ny Andriamanitra Telo Izay Iray?
MATOAN-DAHATSORATRA Nahoana Ianao no Tokony Hivavaka?
MANOVA OLONA NY BAIBOLY Nampiasa Baiboly Foana ry Zareo!
Niaro ny Fahamarinana i Thomas Emlyn
Ny Tilikambo Fiambenana | Aprily 2014
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
IZA moa i Thomas Emlyn, ary nahoana izy no niaro ny fahamarinana? Inona no azo ianarana avy aminy?
Mila mijery izay nitranga tany Angletera sy Irlandy tamin’ny taona 1700 tany ho any isika, mba hamaliana izany. Nanam-pahefana be ny Eglizy Anglikanina tamin’izany, ary tsy nanaiky ny fampianaran’ny eglizy ny olona sasany tao amin’ireo fivavahana protestanta samihafa.
FA IZA MOA I EMLYN?
Teraka tamin’ny 27 Mey 1663 izy, tao Stamford, Angletera. Nanomboka nitory teny izy tamin’izy 19 taona. Lasa mpitoriteny ho an’ny olona ambony iray tao Londres izy taorian’izay, ary avy eo nifindra tany Belfast, any Irlandy.
Nitondra fiangonana tao amin’ny paroasy iray izy, tany Belfast. Lasa mpitory teny tany amin’ny toerana maro samihafa izy, tatỳ aoriana, anisan’izany i Dublin.
NAHOANA IZY NO NOLAZAINA FA NANEVATEVA AN’ANDRIAMANITRA?
Nandalina ny Baiboly i Emlyn. Hitany fa hoatran’ny tsy mitombina ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray, na dia nino an’izany aza izy taloha. Nikaroka tao amin’ny Filazantsara izy, ka resy lahatra hoe marina ny fanatsoahan-keviny.
Tsy tonga dia nampahafantatra an’ilay fanazavana vaovao hitany i Emlyn. Nisy nahamarika anefa tao amin’ny fiangonany fa tsy niresaka momba ny Andriamanitra telo izay iray intsony izy rehefa nitory teny. Fantany fa tsy hanaiky an’ilay fanazavana vaovao ny hafa, ka nanoratra izy hoe: “Tsy maintsy hiala amin’ny asako aho, rehefa avy mampahafantatra ny zavatra inoako.” Nitezeran’ny mpiara-miasa taminy roa izy tamin’ny Jona 1702, satria tsy niresaka momba ny Andriamanitra telo izay iray intsony tao amin’ny toriteniny. Nilazany àry izy ireo fa tsy nino an’izany intsony izy, ka hametra-pialana.
Boky nosoratan’i Emlyn, izay manome porofo avy ao amin’ny Soratra Masina fa tsy ilay Andriamanitra Fara Tampony i Jesosy
Niala tao Dublin, any Irlandy, izy andro vitsivitsy taorian’izay, ary nankany Angletera. Niverina anefa izy rehefa afaka roa volana sy tapany mba handamin-javatra. Nikasa hifindra tanteraka tany Londres mantsy izy. Te hanamarina ny heviny izy tamin’io, ka namoaka an’ilay boky hoe Fanadihadiana Tsotsotra Momba ny Tantaran’i Jesosy Kristy ao Amin’ny Soratra Masina (anglisy). Nohazavainy tsara tao, tamin’ny alalan’ny Baiboly, fa tsy i Jesosy mihitsy ilay Andriamanitra Fara Tampony. Tezitra be ny olona tao amin’ilay eglizy nisy azy tao Dublin, ary nitory azy tany amin’ny fitsarana.
Nosamborina i Emlyn, ary nakarina fitsarana tao Dublin, tamin’ny 14 Jona 1703. Nolazainy tao amin’ilay bokiny hoe Fitantarana Marina Momba An’ilay Fitsarana (anglisy), fa nomelohina izy “satria nanoratra sy nanonta boky milaza fa tsy mitovy amin’Andriamanitra Ray i Jesosy Kristy. Nanevateva an’Andriamanitra sy nanala baraka azy, hono, izy tamin’izany.” Tsy ara-drariny ilay fitsarana. Nisy eveka fito avy tao Irlandy niara-nipetraka tamin’ny mpitsara, ary tsy navela hiaro tena akory i Emlyn. Nilaza taminy i Richard Levins, mpisolovava nalaza, fa “hatao haza lambo” izy. Nilaza tamin’ireo mpitsara i Richard Pyne, Filohan’ny Fitsarana Tampony, teo am-pifaranan’ilay fitsarana, fa ho voasazy izy ireo raha tsy izay didim-pitsarana nandrasan’ny eglizy no avoakany, satria “nanatrika teo ireo eveka.”
“Tsy mampaninona ahy ny mijaly, noho izaho miaro ny fahamarinan’Andriamanitra sy manome voninahitra azy.”—Thomas Emlyn.
Nasain’ny mpisolovava niova hevitra i Emlyn rehefa nomelohina. Tsy nety anefa izy. Nasaina nandoa onitra izy ary voaheloka higadra herintaona. Tsy nahaloa an’ilay vola anefa izy ka nitombo ny saziny. Efa nigadra roa taona izy, vao nisy namany nandresy lahatra ny manam-pahefana mba hampihena an’ilay onitra. Nafahana izy tamin’ny 21 Jolay 1705. Ilay izy afa-baraka no nahatonga azy hiteny hoe: “Tsy mampaninona ahy ny mijaly, noho izaho miaro ny fahamarinan’Andriamanitra sy manome voninahitra azy.”
Nifindra tany Londres i Emlyn ary nihaona tamin’i William Whiston. Manam-pahaizana momba ny Baiboly koa izy io, ary halan’ny olona noho izy namoaka boky manazava ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly. Nanaja an’i Emlyn i Whiston, ka niantso azy hoe: ‘Olona voalohany nanohana ny fivavahana kristianina fahiny.’
NAHOANA IZY NO TSY NINO NY ANDRIAMANITRA TELO IZAY IRAY?
Hitan’i Emlyn sy William Whiston ary Isaac Newton fa tsy mampianatra momba ny Andriamanitra telo izay iray ny Baiboly, na izany aza no resahin’ny Fanekem-pinoan’i Athanase. Hoy i Emlyn: ‘Rehefa nandinika lalina sy nianatra ny Soratra Masina aho, dia hitako hoe tokony hiova hevitra, ka tsy hino intsony ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray.’ Nanatsoaka hevitra izy hoe: “Ilay Andriamanitra sy Rain’i Jesosy Kristy ihany no Fara Tampony.”
Nahoana i Emlyn no nilaza an’izany? Hitany tamin’ny andinin-teny maro fa samy hafa i Jesosy sy ny Rainy. Ireto misy ohatra (natao sora-mandry ny fanazavan’i Emlyn):
Jaona 17:3: “Tsy nantsoina mihitsy i Kristy hoe ilay Andriamanitra mahery indrindra na ilay Andriamanitra tokana.” Ny Ray ihany no antsoina hoe “ilay hany tena Andriamanitra.”
Jaona 5:30: “Tsy manao izay sitrapony fotsiny ny Zanaka, fa ny sitrapon’ny Rainy no ataony.”
Jaona 5:26: “Ny Ray no manome azy ny fiainana.”
Efesianina 1:3: “Resahina matetika hoe Zanak’Andriamanitra i Jesosy Kristy, fa mbola tsy nantsoina hoe Rain’Andriamanitra mihitsy ny Ray, na dia antsoina matetika hoe Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika aza.”
Hoy i Emlyn rehefa nandinika ny porofo rehetra: “Tsy misy andinin-teny, na iray aza, ao amin’ny Soratra Masina milaza fa iray ihany ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Na andinin-teny milaza an-kolaka an’izany aza tsy misy.”
INONA NO IANARANTSIKA AVY AMIN’IZANY?
Maro izao no tsy sahy miaro ny fahamarinana ampianarin’ny Soratra Masina. Tsy hoatr’izany anefa i Emlyn. Hoy izy: “Raha tsy sahy miaro ny fahamarinana tena lehibe ny olona iray, na dia mahita porofo mazava avy ao amin’ny Soratra Masina aza, inona moa no antony amakiany sy ikarohany azy ireny?” Tsy nanaiky hiala tamin’ny fahamarinana mihitsy i Emlyn.
Hanahaka an’i Emlyn sy ny hafa ve isika, ka ho vonona hiaro ny fahamarinana na dia misy mankahala aza? Saintsaino hoe: ‘Ny voninahitra sy ny soa azoko avy amin’ny fiaraha-monina ve no zava-dehibe amiko sa ny miaro ny fahamarinana avy ao amin’ny Tenin’Andriamanitra?’
Aprily 2014 | Nahoana Ianao no Tokony Hivavaka?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Aprily 2014 | Nahoana Ianao no Tokony Hivavaka?